Momba anay | Zhejiang Feegoo Technology Co., Ltd.
ZHEJIANG FEEGOO TECHNOLOGY Co. Mpanadidy taratasy, sns. Ny orinasanay dia natsangana tamin'ny taona 2017, ny ekipa injeniera dia manana traikefa famokarana 16 taona, ekipa mpivarotra manana traikefa fanondranana 16 taona, miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001, CE, 3C, ROHS.
Ny vokatray dia aondrana any Azia atsimo atsinanana, Eoropa, Aostralia, Amerika ary nahazo laza tsara.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpamatsy fanamainana tanana malaza indrindra, Feegoo dia mihoatra ny 16 taona ny fifantohana amin'ny teknolojia fanamainana tanana, izay natomboka tamin'ny fikarohana sy ny famokarana motera tamin'ny 2006, ary ny famolavolana sy famokarana fanamainana tanana Jet roa tamin'ny 2006. Nantsoinay hoe FG2006 Jet fanamainana.
FEEGOO factorie ao NINGBO, misy velaran-tany mihoatra ny 10000 metatra toradroa. Mpiasa mahay mihoatra ny 100 no miasa amin'ny tsipika famokarana tsy miankina 6. Sampana famokarana feno, ao anatin'izany ny atrikasa fandrakofana, atrikasa maotera, atrikasa PCB, atrikasa fivoriambe, atrikasa metaly, atrikasa fanaovana hosodoko ary laboratoara mamokatra maherin'ny 200.000 pcs isan-taona.
Feegoo dia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny famokarana lamba fanamainana mandritra ny 15 taona mahery, miaraka amin'ny ekipa sangany R&D misy injeniera 15. Feegoo dia manome lanja lehibe ny saha R&D ary manangom-bola bebe kokoa noho ny ankamaroan'ny mpanamboatra hafa ary niditra an-tsokosoko ho an'ny mpanamory tanana 10 18models tanteraka miaraka amin'ny patanty mihoatra ny15.
Vonona izahay hiara-hiasa amin'ny mpanjifa hamorona vokatra vaovao ary hiara-mahazo tombony. Manana ekipa mpamolavola matanjaka izahay. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay
6 ny mpanara-maso kalitao dia mifehy fatratra ny lafiny rehetra amin'ny famokarana arakaraka ny fomba fitiliana 6, ao anatin'izany ny fitsapana maotera, fanaraha-maso PCB, fanaraha-maso fonony, fanaraha-maso vokatra efa vita ary fitsapana vokatra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra miaraka amina fenon'ny asa fanompoana 5 taona.
Ny fanamainana tanana Feegoo dia aondrana any amin'ny firenena sy distrika maherin'ny 110, ary mahatratra 30% ny tsena any ivelany toy ny UK, France, Germany, Spain, Russia, Israel, Azia atsimo atsinanana, India, USA, Canada, Brazil, sns. on.
Mifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra izahay, afaka mamaly ny filan'ny firenena samihafa ny vokatray. Nahazo fanamarinana samihafa tany amin'ny firenena samihafa.
Ny fanomezan-toky tsara an'i Feegoo momba ny vokatra dia voamarina amin'ny ISO9001, CE, CB, FCC, ROHS, GS, INMETRO ary CCC sns.